SMTube: Tamba mavhidhiyo eYouTube muSMPPlayer | Linux Vakapindwa muropa
Kuwanikwa YouTube inowanikwa kubva kune akawanda mapuratifomu, saka tinogona kunakidzwa nemaawa akati wandei ezvinyorwa kubva chero mudziyo, kungave kubva ku-smartphone, piritsi kana kubva pakombuta yako.
Munyaya ye Paunotendeukira kune komputa yako, nzira iyo vazhinji vedu tinowanzoziva ndeyekuwana chikuva nerubatsiro rwewebhu webhu, asi haisi iyo yega, mune ino chinyorwa tora mukana wekutarisa paSmTube.
SMTube chishandiso chinoshanda pamwe chete neSMPlayer mutambi iyo yatinogona kufamba nayo YouTube chikuva uye nekudaro kutsvaga uye kutamba YouTube mavhidhiyo pakombuta yedu.
Kune avo vachiri kusaziva SMPlayer ini ndinongoti iyi inozivikanwa kwazvo multimedia player, inova graphical interface ye mplayer ne mpv.
Na SMTube isu tinochengetedza iyo yekudhura zviwanikwa, sezvo isu tichizodzivirira kushandiswa kunoda kuitiswa kwebrowser.
Sezvo mavhidhiyo achiridzwa neSMPlayer media player kwete Flash player, izvi zvinobvumira kuita zvirinani, kunyanya zvine HD zvemukati.
Imwe ye mabhenefiti makuru atinawo nekushandisa SMTube ndizvozvo iyo application inosangana zvakakwana neYouTube-dl Saka kwete chete isu tine mukana wekuona edu aunofarira mavhidhiyo neSMPlayer, asi isu tinokwanisa zvakare kudhawunirodha nekuachengeta pakombuta yedu.
Izvo zvakati, iko kunyorera hakuna kuitirwa kushandisa SMPlayer semutambi, Isu zvakare tine mukana wekushandisa vamwe vatambi ayo ari: MPV, VLC, Mplayer, Dragon Player, Totem, GNOME-MPlayer nezvimwe.
1 Maitiro ekuisa SMTube paLinux?
2 Nzira yekushandisa SMTube?
Maitiro ekuisa SMTube paLinux?
Kana iwe uchida kuyedza iyi application, izvo zvatinofanira kuita ndeizvi vhura terminal uye unomhanya inotevera mirairo, zvinoenderana nekuparadzirwa kwatinako:
Kuisa SMTube paUbuntu uye zvigadzirwa, isu tinofanirwa kuwedzera inotevera dura kune yedu runyorwa.
Ipapo isu tichagadzirisa zvinyorwa zvedu:
Uye pakupedzisira isu tinoisa SMTube ne:
Panguva yaDebian tinofanira kuzviita zvinotevera:
Ipo, kune Fedora, iyo SMTube yekumisikidza mirairo ndeinotevera:
Pakupedzisira, kuisa SMTube muArchLinux uye zvigadzirwa:
Nzira yekushandisa SMTube?
Waita kuiswa kwekushandisa, pisu tinoda kuzviita. Kuve mairi nekukasira, icharatidza runyorwa rwemavhidhiyo atinogona kuona nekungodzvanya pane chero eawo.
Pasi pemenu tine injini yekutsvaga yemukati iyoizvo zvichatibatsira kutsvaga mavhidhiyo, kuKurutivi rworuboshwe tine sefa yatinogona kudzora nayo kutsvaga kwemavhidhiyo kune chero ezvikamu izvo iyo yaanotipa.
Kune rumwe rutivi, mubar yemenyu Muchikamu chekufambisa isu tinongowana mabhatani ekufambisa ayo chero webhu browser.
Mu See tinogona kumisa chishandiso uye chinzvimbo bhari uye pakupedzisira Zvirongwa zveSMTube. Kana tikachiwana isu tichava nechinhu chakadai.
Kupi isu tinogona kusarudza iyo default resolution kuti isu tinoda kuti mavhidhiyo abudiswe zvakare, muchikamu chevatambi isu isu ticha sarudza nemutambi upi iko kunyorera kuchatsigirwa kuburitsa mavhidhiyo.
Pakupedzisira, Tinogona zvakare kusarudza sevhisi yekunze kana tichida kurodha pasi mavhidhiyo.
Pakupedzisira, Isu tinogona zvakare kushandisa iyo yechipiri kubaya pane imwe vhidhiyo kwatinowana mukana wekusarudza kana vhidhiyo ichavhurwa nemutambi, kana tichizotora, dai chete odhiyo ichizoridzwa uye pakupedzisira kana tichida kuteedzera iyi link kana tichida kuti vhidhiyo ivhure mukati bhurawuza redu.
Pasina imwezve ado yekuti iko kushanda kuri kuona zviri nyore, ine mikana mikuru yekutenda nekureruka kwayo kwekugona kusangana nemamwe masevhisi. Ndakaona kuti vamwe vanhu vanoshandisa chishandiso ichi kuti vakwanise kuona yavo IPTV zvinyorwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Multimedia » SMTube: Tamba mavhidhiyo eYouTube muSMPPlayer